शोभराजलाई रगत दिनेले ८० हजार मागेपछि रोइन् निहिता – Enepali Online
Enepali Online | June 16, 2017 | News | No Comments
काठमाण्डु, ३० जेठ– कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजको मुटुको भल्भको अप्रेसन सफल भएको छ । बाँसबारीस्थित गंगालाल अस्पतालमा सोमबार बिहान उनको मुटुको भल्भ फेरिएको हो ।
अप्रेसनका लागि शोभराज शुक्रबार गंगालाल अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । डा. रामेश कोइराला नेतृत्वको टिमले उनको अप्रेसन गरेको हो । शोभराजको अप्रेसन सफल भएको र उनको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको कोइरालाले बताए । बेलुका अबेरतिर शोभराजको होस आएको थियो । उनलाई आईसियूमा राखिएको छ ।
अपराधकै कारण बिश्वमा कुख्यात शोभराज विगत १४ वर्षदेखि नेपालको जेलमा छन् । शोभराजकी ‘श्रीमती’ निहिता विश्वास र निहिताकी आमा शकुन्तला थापा सोमबार बिहानै अस्पताल पुगेका थिए । अप्रेसनका लागि आवश्यक रगत निहिताले शोभराजलाई दिएकी हुन् । दुवैको रक्त समूह ओ पोजेटिभ हो । थप रगत संकलनका लागि निहिताले नै पहल गरेकी थिइन् । तर, रगत दिने बताएका केही व्यक्तिहरुले ८० हजार रुपैयाँ मागेपछि निहिता रोएकी थिइन् । थप रगत अस्पतालले नै व्यवस्थापन गरेको थियो ।
कैदीको सबै उपचार सरकारकै जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसकारण शोभराजको उपचारको खर्च सरकारकै हुन्छ । मुटुको भल्भको उपचारका २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । अस्पतालमा शोभराजलाई कडा सुरक्षा घेरामा राखिएको छ ।
अप्रेसन सफल भए पनि यस्तो अप्रेसनको सफलता २/३ महिनापछि मात्र प्रष्ट हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । ‘भल्भलाई शरीरले एसेप्ट गरे नगरेको २/३ महिनापछि मात्र थाहा हुन्छ,’ गंगालालका एक चिकित्सकले भने ।
बमनै समात्न आँट गर्ने साहसी राणा को हुन् ? दुइ सेकेण्डमै पड्किने बम थियो राणाको हातमा
खुसीको खबर ! नेपालमा नैसुरु भो अब मोटरसाइकल उत्पादन,के मूल्य घट्ला ??